ParallelCoin စျေး - အွန်လိုင်း DUO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ParallelCoin (DUO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ParallelCoin (DUO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ParallelCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ParallelCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ParallelCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ParallelCoinDUO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.234ParallelCoinDUO သို့ ယူရိုEUR€0.198ParallelCoinDUO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.179ParallelCoinDUO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.213ParallelCoinDUO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.11ParallelCoinDUO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.48ParallelCoinDUO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.22ParallelCoinDUO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.876ParallelCoinDUO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.313ParallelCoinDUO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.327ParallelCoinDUO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.24ParallelCoinDUO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.81ParallelCoinDUO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.27ParallelCoinDUO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹17.55ParallelCoinDUO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.39.5ParallelCoinDUO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.321ParallelCoinDUO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.354ParallelCoinDUO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.3ParallelCoinDUO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.63ParallelCoinDUO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥24.78ParallelCoinDUO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩278.1ParallelCoinDUO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦90.47ParallelCoinDUO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽17.24ParallelCoinDUO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.48
ParallelCoinDUO သို့ BitcoinBTC0.00002 ParallelCoinDUO သို့ EthereumETH0.000593 ParallelCoinDUO သို့ LitecoinLTC0.00404 ParallelCoinDUO သို့ DigitalCashDASH0.0024 ParallelCoinDUO သို့ MoneroXMR0.0025 ParallelCoinDUO သို့ NxtNXT16.39 ParallelCoinDUO သို့ Ethereum ClassicETC0.0336 ParallelCoinDUO သို့ DogecoinDOGE68.94 ParallelCoinDUO သို့ ZCashZEC0.00246 ParallelCoinDUO သို့ BitsharesBTS9.01 ParallelCoinDUO သို့ DigiByteDGB8.03 ParallelCoinDUO သို့ RippleXRP0.793 ParallelCoinDUO သို့ BitcoinDarkBTCD0.00796 ParallelCoinDUO သို့ PeerCoinPPC0.78 ParallelCoinDUO သို့ CraigsCoinCRAIG105.22 ParallelCoinDUO သို့ BitstakeXBS9.85 ParallelCoinDUO သို့ PayCoinXPY4.03 ParallelCoinDUO သို့ ProsperCoinPRC28.98 ParallelCoinDUO သို့ YbCoinYBC0.000124 ParallelCoinDUO သို့ DarkKushDANK74.04 ParallelCoinDUO သို့ GiveCoinGIVE499.78 ParallelCoinDUO သို့ KoboCoinKOBO51.77 ParallelCoinDUO သို့ DarkTokenDT0.215 ParallelCoinDUO သို့ CETUS CoinCETI666.39